Maxay Jeelasha Ugu Bedelayaan Booqashooyinka Wicitaanada Video--News-Yuyao Xianglong Communication Industrial Co., Ltd.
Maxay tahay sababta xabsigu u baddalayaan booqashooyinka iyagoo wata wicitaanno fiidiyoow ah?
Waqtiga: 2020-08-12 Hits: 15
Sanadihii la soo dhaafay, jeelal aad iyo aad u tiro badan ayaa soo bandhigay adeegyo wicitaan fiidiyoow ah.
Aragti ahaan, alaabooyinkan ayaa fududeyn kara maxaabiista si ay u ilaashadaan xiriirka ay la leeyihiin qoyskooda iyo asxaabtooda dibadda.
Daraasadaha ayaa si isdaba joog ah u muujiyay in maxaabiista xiriirka dhow la leh dunida dibaddeeda ay u badan tahay inay ka fogaadaan dhaqan u horseedaya inay khatar geliyaan sii deynta hore.Si laga soo xigtay Xafiiska Federaalka ee Xabsiyada, maxaabiista xiriirka adag la leh asxaabtooda iyo qoyskooda waxay si weyn u yareysaa halista dib u noqoshada. Sidoo kale, asxaab badan iyo qoysas badan kuma noola agagaaraha xarumaha, marka booqashooyinka goobta waxay noqon karaan kuwo qaali ah, aan dhib badnayn oo aan raaxo lahayn. Booqashooyinka fiidiyow ee fog, asxaabta iyo qoysku waxay la yeelan karaan xiriir shaqsiyeed ka badan raaxada guryahooda. Booqashada qof ahaaneed waxay u baahan tahay kormeer shaqaale oo dheeri ah - labadaba inay galbiso maxaabiista una soo galiso qolalka booqashada iyo in la hubiyo in koontarabaanku uusan gacmaha isbadalin inta booqashada lagu jiro Marka u beddelashada booqashada fiidiyowga waxay badbaadin kartaa lacag jeelasha jeebka ku xiran.
Laakiin jeelasha sidoo kale waxay si toos ah uga faa'iideystaan ​​xaddidaadda booqashooyinka qofka. In kasta oo booqashooyinka fiidiyowga ee goobta badanaa bilaash ah, shirkadaha bixiya nidaamka guud ahaan waxay bixiyaan adeeg wicitaan fiidiyoow ah oo goobta laga bixiyo, sidoo kale. Jeelkuna wuxuu helaa boqolkiiba xoogaa lacagtaas ah.
Maadaama aan nahay shirkad hogaamiye u ah qalab telefoon oo amni iyo warshad leh taleefanka gacanta, biiro jillaab, iyo furayaasha. Qaybaha taleefanka ee Xianglong waxaa la geeyay in ka badan 300 oo xabsi oo adduunka oo dhan ah. Si aad wax badan uga ogaato annaga, ku soo dhawow la-tashiga!
Hore: 16 Buttons Fure Key oo aan Xabbad Laheyn oo Lagu rakibay Mashruuca Golaha Sare ee Parcel
Xiga: Xirmay Koontaroolka Kaantaroolka dhijitaalka ah ee Koronto-Wejiga ah ee Xirmiska-Guryaha ee Xiran